किन भयो प्रदेश ६ र ७ मा सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाइ ? – Puleso
किन भयो प्रदेश ६ र ७ मा सरकार गठनको प्रक्रियामा ढिलाइ ?
पाँचवटा प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बेला ६ र ७ मा भने ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका शेरधन राईले आज नियुक्ति पाउनेछन् । बिहीबार शपथपछि तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी छ । प्रदेश सभामुखमा प्रदीपरत्न भण्डारी नियुक्ति भएका छन् । बिहीबार बस्ने प्रदेश सभा बैठक उपसभामुखको चयन गर्नेछ ।
प्रदेश ७: सानो आकारको सरकार गठनको तयारी